Safarka Lacagta | ThatsLuck.com
Sidaad horeba u fahamsanayd barnaamijka cusub ee roulette Safarka Lacagta fikrad ahaan waxay ku saleysan tahay hooyada dhammaan dhaqaajinta dhaqaalaha si loogu guuleysto roulette, ama martingale.
La martingale waa qayb ka mid ah xeelado loo adeegsaday khamaarka oo asal ahaan ka soo muuqday faafitaankoodii ugu weynaa qarnigii XNUMXaad ee Faransiiska
Xeeladaha ugu fudud, martingale, waxaa loogu talagalay ciyaar aad ugu eg madaxyada ama dabo la shilimaad ah., kaas oo loogu talagalay ku guuleysiga sharadka haddii ay dhacdo madaxyo iyo lumis haddii ay dhacdo dabo.
Martingale wuxuu uga baahan yahay ciyaaryahanka inuu labalaabmo sharadkooda khasaaro kasta ka dib, si guushii ugu horeysay ay uga soo kabato khasaarihii hore oo dhan oo lagu daro guul u dhiganta saamiga asalka ah.
Isagoo u maleynaya inuu ciyaartoy leeyahay raasamaal aan xad lahayn oo la heli karo, sidaas darteed wuxuu had iyo jeer awood u leeyahay inuu daboolo sharadka soo socda haddii ay dhacdo khasaaro, waxaa suurtagal noqon laheyd in la xaqiijiyo khaladka istiraatiijiyadan, maadaama goor dhow ama goor dambe uu daruuri u soo bixi doono madax, ama Casaan tusaale ahaan haddii aan tixgelinno ciyaarta Roulette.
Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, ma jiro ciyaaryahan sida caadiga ah leh awood dhaqaale oo noocan oo kale ah si uu ula qabsado kororka saamiga saamiga haddii ay dhacdo wareegyo badan oo isdaba-joog ah oo lumiya tan tanna waa inaan sidoo kale ku darnaa xaddidyada khamaarka ay bixiyaan dhammaan casinos-ka adduunka , labadaba dhabta ah iyo khadka tooska ah.
Dhaqdhaqaaqa ugu fiican
In kasta oo ay xaqiiqo tahay in martingale uu horseed u noqdo burburinta ciyaaryahanka sababaha aan kor kusoo xusnay, haddana sidoo kale waa run in ay tahay nidaamka keliya ee maqnaanshaha raasamaal ama saamiga saamiyada loo aqoonsaday in lagu guuleystay 100%.
Kahor intaan la fikirin barnaamijka cusub ee roulette Safarka Lacagta Waxaan isweydiiyay: suurta gal ma tahay in la dajiyo qaab ciyaar oo ku saleysan isla mabda 'ahaan martingale oo aan ku xirneyn raasamaal ama saamiga saamiyada?
Xaqiiqdii, furaha (ama ugu yaraan mid ka mid ah furayaasha suurtagalka ah) ee si isdaba joog ah loogu guuleysto roulette wuxuu noqon lahaa in 25 ama 26-stroke martingale la ciyaaro.
Laakiin maxaa loola jeedaa sameynta martingale ciyaar?
Mid ka mid ah runti muhiim ah oo aan ka bartay sannadahan barnaamijku waa taas inaad runti isku daydo inaad guuleysato waa inaad marka hore fahanto sababta guuldaradaada.
Markaad martingale tahay waxaad badiyaa u lumaysaa 3 sababood:
1. madaxbanaanida shaqsiyaadka loo yaqaan 'roulette roulette spins' (cunsur had iyo jeer uu iska indhatiro ciyaaryahanka)
2. xadka xadidaada khamaarka;
3. Xadka lacagta ciyaaryahanka.
Aniga oo ka bilaabaya gorfaynta sadexdan xad ee fudud laakiin aan laga gudbi karin, ayaan dhigay Safarka Lacagta nooc ka mid ah Nawaaxiga GPS, kaas oo ka bilaabanaya saldhig bilow ah (the bankroll hal kulan oo ciyaar ah), waxaad si toos ah ugu hagaysaa ciyaaryahanka meesha ugu dambeysa ee ay tagayaan, taasi waa guulihii la rabay.
Kahor sharraxida sida loo isticmaalo Safarka Lacagta, Waxaan sharxi doonaa waxa fikradaha ay ku saleysan tahay: ficil ahaan marka aan ciyaareyno martingale waxba ma qaban karno laakiin waxaan labanlaabeynaa sharadka oo leh wareeg kasta oo lumay, illaa aan ka guuleysanno cutubka aasaasiga ah ee sharadka.
Falanqaynta sharadka si gooni gooni ah, waxaan arki karnaa inay wada yihiin hal khaas oo suurtagal ah qiyaastii 50% (48,65% inay noqoto mid sax ah) wayna ka madaxbanaan yihiin midba midka kale (qodobka 1 ee liiska kor ku xusan), macnaha ah inaysan ahayn waxaa laga yaabaa inaan ka helno macluumaad wax ku ool ah natiijooyinkii hore si aan u dejino waxyaabaha naga dambeeya.
Hagaag, waxaan isweydiiyay: ma jiraan qamaar kale oo roulette ah oo leh isla lacag bixinno kudhowaad 50%, laakiin taasi kuma dhamaanayso hal talaal oo keenta labalaab sharadka?
Jawaabtu waa haa, maxaa yeelay haddii, tusaale ahaan, aan go'aansano inaan ciyaarno khamaar toosan oo loogu talagalay 37 wareeg, oo had iyo jeer lagu sharfo Cas, suurtagalnimada ku guuleysiga "ugu yaraan" 18 wareegyada ma ahan 50%, laakiin 56%!
Isku-darka tan iyo kuwa kale ee suurtogalka ah adiguba waad xaqiijin kartaa adoo adeegsanaya barnaamijka bilaashka ah ee ►Turbo Bet Calc.
Ugu horreyntii, sidaas darteed waxaan ku beddelay sababtayda hal-ku-dhigga leh sortie inta badan 48,65% oo leh taxane taxane ah, oo guud ahaan leh soo noqnoqod aad uga sarreeya 50%.
Safarka Lacagta Sidaa darteed waxaa lagu wadaa inay ku guuleysato lacag uu go'aansaday ciyaaryahanka, marka shardiga la buuxiyo in X khamaarista ku jirta Y wareega lagu guuleysto.
Ha ku khaldin caqliga loo adeegsaday habka xisaabinta Masaniello ee si fiican loo yaqaan, xaqiiqdii waxyaalaha la mid ahi way badan yihiin, laakiin Money Trip saamigu wuu ka madax bannaan yahay saamiga, sida uu yahay saamiga keliya.
Safarka Lacagta: Software-ka
On our ► kanaalka fiidiyowga hubaal waxaad ka heli doontaa fiidiyowyo qaarkood oo muujinaya sida loo tijaabiyo cayaarteenna si loo gaaro guusha la doonayo, si kastaba ha noqotee, aan ka bilowno xulashooyinka aasaasiga ah si aan u fahamno sida ugu badan looga faa'iideysan karo qalabkan cajiibka ah ee aan gacanta ku hayno.
Marka la furo, Safarka Lacagta waxay ku timaaddaa shaxanka qaab-dhismeedka GPS-ka dhabta ah, halka bidix ee dashboardka aan ka helno saldhigyada aasaasiga ee safarka, halka dhinaca midigna ay ka jiraan macluumaad muhiim ah oo lagu gaarayo guusha la doonayo.
Aynu isla markiiba ka bilowno qaybta bidix: berrinka Dhibco (wax laga beddeli karo) qiimaha 37 ayaa horeyba loo dejiyay, taas oo u dhiganta wareeg dhammaystiran oo tirooyinka nambarka ah, oo ah 37.
Beerta Left waxay tilmaamaysaa (sidaa darteed lama beddeli karo) tirada wareegyada ee hadhay dhammaadka wareegga sidaas darteedna waxay si cad u hoos u dhacaysaa 1 khamaar kasta.
In garoonka Qiimaha Cutubka waa inaan galnaa qiimaha kuweena sharad saldhig, kaas oo noqon kara 1 euro (markaa waxaan ka tagnaa 1), ama 5 euro (marka waa inaad gashaa qiimaha 5).
Il badhanka buluuga ah isla markiiba midigta (kan leh lacag) u adeegtaa ku darid unugyada aan dooneyno inaan ku guuleysano sanduuqa Target (qeybta saxda ah), waxay ahaan laheyd ficil ahaan halka ugu dambeysa ee safarkayaga, ama guulaha aan dooneyno inaan gaarno.
Markaa haddii aan doonayo inaan ku guuleysto 10 euro oo ku ciyaaraya halbeeg aasaasi ah oo ah 1 euro, waxaan geli doonaa qiimaha 1 ee qaybta Qiimaha Unugga oo waxaan ku dhajin doonaa badhanka buluugga toban jeer si aan u kordhiyo qiimaha lagu guuleysto oo aan arki doono iyadoo la soo sheegay Target midigta.
In garoonka Bet Min Waxaan gali doonaa sharadka ugu yar ee la oggol yahay miiska aan ku ciyaarayo (oo lagu xisaabiyo wareejinta tartamada) iyo berrinka Bet Max Anigu geli maayo saqafka miiska, laakiin sharadka ugu badan ee aan go'aansado inaan sameeyo.
Dejinta sharad ugu sarreysa sida aad arki doontid waa aasaas, marka hore maxaa yeelay waxaan si uun isugu dayaynaa inaan ka fogaanno xaddidaadda ay soo rogtay casino (taas oo aad uga sii badnaan karta, laakiin sikastaba ha noqotee inta badan ee aad kicinayso hal-ku-dhufashada halista ah, ka sii xun waa, sababtoo ah shaqsiyaad madax-bannaan oo wax ku dhufanaya, muddada gaaban wax kasta ayaa nagu dhici kara), tan labaad maxaa yeelay, sidaad arki doonto, haddii sharaddu ay ku dhowdahay xadkayaga, waxay ka dhigan tahay in kalfadhigu si xun u socdo oo sidaas darteed naakhuudeheennu wuxuu ka digayaa khatarta, soo jeedinta 3 xulashooyinka suurtogalka ah ee ciyaarta taas oo aan sifiican u arki doono goor dambe.
Sida iska cad kuma ciyaari kartid cutubka aasaasiga ah ee 5 euro oo ma geli kartid ugu badnaan 7,5 euro (baaritaannadii ugu horreeyay ee aan sameeyay waana runti waxaan ka baxay waddada ka dib geesyo khatar ah), aan dhahno saamiga wanaagsan ee bet ugu badnaan waa 10 jeer unit aasaasiga ah, iyo sidoo kale a Target macquul waa in lagu dejiyaa 50% ee bankroll, taas oo markaa iyadu ugu yaraan noqonaysa labanlaab yoolka.
Marka haddii aan si dhab ah u dooneyno inaan ku guuleysano tusaale ahaan 25 euro, safarkayaga waxaan u baahanahay a bankroll 50 euro ah, lagu ciyaaro 0,5 euro euro oo geli Bet Max 5 euro (yacni toban jeer qeybta aasaasiga ah).
Aynu sii wadno falanqaynta guddiga bidix: Fursad Xul waxaa loo isticmaalaa in lagu xusho nooca weerarka aan dooneyno inaan ku dhaqaaqno.
Tusaale ahaan, haddii isku daygii ugu horreeyay ee aan ku guuleysanno 18 ku dhufto 37 ka mid ah uu guuldareysto maxaa yeelay waxaan gaarnay sharaddii ugu badneyd ama daalkii 37 wareejinta, ama si ka fudud waxaan go'aansanay inay ka wanaagsan tahay in la beddelo weerarka maxaa yeelay qiimaha Guul% dhanka midig wuxuu kudhow yahay eber (qiimahan waxaa loo isticmaalaa in lagu fahmo sida naloo dhigay safarka, ficil ahaan waa boqolkiiba boqolkiiba dhabta ah ee aan ku guuleysan karno tallaalada haray si aan u gaarno hadafka), waxaan go'aansan karnaa inaan bedelno xeeladaha oo aan bilowno waddo cusub oo 37 ah ayaa ku wareegaysa fursado fudud, ama ciyaarta gebi ahaanba beddela oo u gudub sharadka darsin, lixaad ama mid ka mid ah xulashooyinka kale ee la heli karo.
Ikhtiyaar kasta oo aan doorto, weli waxay noqon doontaa dhacdo leh suurtagalnimo ku dhow 60% sidaa darteedna lama sugi karo muddo dheer!
Ficil ahaan, istiraatiijiyadeena waxaa lagu soo koobi karaa sida soo socota: Waxaan isku dayaa inaan ciyaaro inta ugu badan ee suurtogalka ah anigoo isku dayaya inaan sharadka ka hoos dhigo Bet Max, illaa aan la kulmo kalfadhi wanaagsan (oo tirakoob ahaan ka badan kuwa xun) taas oo iga dhigeysa inaan xiro ciyaarta.
Tani waa ciyaar dulqaad leh, celcelis ahaan waxay qaadataa ugu yaraan 3 kalfadhi si aad uhesho qadka dhamaadka kadibna qiyaastii 1 saac oo ciyaar ah markay sifiican u socoto, taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la sameeyo baaritaano badan (kaliya at live live si cad) in sifiican loo fahmo dhamaan faragalinta suurtagalka ah ee ciyaaryahanka sameyn karo si uu u gaaro hadafkiisa.
Mar kasta oo qayb cusub la bilaabo, riix Badhanka Xiddiga, tan waxaa loo isticmaalaa in lagu xisaabiyo tirada wareegyada iyo hits ee loo baahan yahay si loo sameeyo dhacdo leh ixtimaal ka badan 50%.
Tusaale ahaan, haddii weerar ahaan aad rabto inaad doorato daraasiin ama tiirar, adoo riixaya badhanka Xiddiga waxaad arki doontaa in dariiqa ciyaarta la soo saari doono taas oo loogu talagalay 37 wareegyada ay macquul tahay 44% tanina taasi ma fiicna, si loo daaweeyo, gal 50 halkii aad ka gali laheyd 37 oo ku taal garoonka 'Spins field' oo riix xiddigta, waxaad arki doontaa in suuragalnimadu ay u kici doonto heer sare 58%, oo leh 16 hits oo lagu guuleysto 50 wareeg.
Tallaal kasta oo uu ku guuleysto ama lumiyo waa inaad si cad u gujisaa badhanka Win e Lostintuu duurka ku jiray Nooca RNG Waxaan heysanaa talo nasiib ah oo loogu talagalay khamaaristayada suurtagalka ah.
Sida iska cad maahan hadal hadal ah, laakiin marwalba waan istcimaalaa maxaa yeelay waxaan u dhigay qaab ah inaan soo jeediyo qamaar aan kala sooc lahayn, laakiin in la beddelo oo kaliya markii lagaa adkaado sharad.
Sidan ayaad si buuxda uga faa'iideysan kartaa istaroog kasta oo isku xigxiga oo guuleysta iyo haddii aad daawato fiidiyowga soo-jeedinta Safarka Lacagta ku yaal ► kanaalka fiidiyowga ikhtiyaarkan ayaa cadeeyay inuu yahay faa iido dhab ah, gaar ahaan weerarkii seddexaad ee darsin / tiirar.
Ugu dambeyntii, qeybta saxda ah waxaan ka helnaa:
AkeIska qaad: dheelitirka bangigayagu (had iyo jeer wuxuu ka bilaabmaa eber bilowga safarka);
ArUjeedka: intee in le'eg ayay tahay inaan ku guuleysano marka la barbardhigo yoolka ugu dambeeya (wuu naaqusayaa inta aan guuleysaneyno wuuna kordhayaa markaan guul darreysano);
Wax ku dhufasho: tirada toogashada si loo guuleysto si loo gaaro xariiqda dhamaadka;
Guul%: suurtogalnimada aan ku gaari karno xariiqda dhamaadka qeybta hadda jirta;
Khamaarka xiga: qadarka lagu sharaddeeyo wareegga xiga.
Haddii aad rabto inaad barato sida loo wado gaarigaaga habka ugu wanaagsan uguna qaado meesha aad u socoto marar badan, xusuusnow in:
Ha deg-degin, ha bilaabin kulan ciyaar haddii aadan haysan ugu yaraan dhowr saacadood oo ah meesha aad adigu iska bixin karto, iska yeel runti inay tahay inaad kaxeyso 200 oo kilomitir xaaladaha cimilada aan la saadaalin karin, marka waa inaad barataa wadista si taxaddar leh u qoyan, si aad u gelisid silsilado marka uu barafku socdo aadna ugu cadaadiyo xawaaraha markii qorraxdu ugu dambayn soo baxdo.
Waqti kasta (oo badanaa way dhacdaa) inaad gaarto Bet Max halkaas ayey joogaan 3 xulashooyin suurtagal ah: 1 Ku bilow kalfadhi cusub adigoo higsanaya isla fursad, 2 ku bilaw cashar cusub adoo bedelaya fursadaha, 3 bilaabaan kulan cusub by kordhinta tirada Lataliyihii inuu u ciyaaro.
Dhammaan xulashooyinkani waxay leeyihiin ujeedo keliya oo asaasi ah: hoos u dhig sharadka bilowga ah.
Sidaa darteed ciyaaryahanka ayay ku xiran tahay inuu fahmo wajiga uu marayo iyo inuu qaato (ama ugu yaraan isku dayo) istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee uu ku sii wadan karo safarkiisa ku aaddan himilada uu u qalmo.
Waxaan aad ugu talinayaa, ka dib markaad si fiican u aqriso boostada oo dhan, inaad sidoo kale ka daawato fiidiyaha on kanaal, fadhiga looga hadlay fiidiyowga wuxuu hubaal ka dhigayaa mid kafiican xaqiiqooyinka waxaan isku dayay inaan halkan ku sharaxo ereyo.
Ku baashaal Safarka Lacagta hana iloobin inaad subscribe ku dhigto kanaalka Telegram hadii aad rabto inaad ku eegto dhamaan wararka ku jira barnaamijka.
Soo Degso Fayl	MTrip.zip - 2 MB